100% Waxbarashada K -5 - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Jawaabta COVID-19 >
Barashada onleenka ayaa soo noqonaysa dayrtaan!
Iyada oo laga jawaabayo baahiyaha qoysaskeena, Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Stillwater waxay siinayaan 100% ikhtiyaar waxbarasho oo onlayn ah ardayda fasallada K-5 bilowga sannad-dugsiyeedka 2021-2022. Ikhtiyaarkan waxaa loogu talagalay in loogu adeego carruurta ka yar 12 sano ee aan weli u qalmin tallaalka COVID-19. Qoysasku waxay u baahnaan doonaan inay ku dadaalaan barnaamijka simistarka kowaad oo boosku wuu xaddidan yahay.
Diiwaangelintu waxay hadda u xidhan tahay barashada onlaynka ah.
Barashada khadka tooska ah ayaa la bixin doonaa simistarka koowaad, kaas oo socon doona illaa Janaayo 21, 2022. Helitaanka barashada onlaynka ee Semester 2 ayaa la go'aamin doonaa dabayaaqada dayrta, taas oo ku xidhan xaaladda masiibada iyo arrimo kale oo lagu go'aamiyey gudaha iyo MDE labadaba.
Barnaamijku wuxuu aad ugu ekaan doonaa qaabkii sannadkii hore 100% ee barashada internetka. Ardayda waxaa baraya macallimiinta Stillwater, waxay heli karaan manhajkeenna, waxayna kula xiriiri doonaan dhiggooda iyo ardayda ay isku fasalka yihiin meel bannaan. Bartayaasha onleenka ah ayaa waliba heli doona dhammaan shaqaalaha iyo adeegyada taageerada cajiibka ah ee degmadeena.
Ogow: Helitaanka Barashada onleenka waxay ku xiran tahay oggolaanshaha ka -dhaafitaanka Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE) iyo guddiga dugsigeena.
Barashada onleenka waxaa heli kara oo keliya ardayda Dugsiga Dadweynaha Aagga Stillwater ee fasallada K-5.
Qoysasku waa inay ku dadaalaan barnaamijka simistarka koowaad oo dhan.
Boosku wuu xaddidan yahay.
Mudnaanta waxaa la siin doonaa qoysaska isdiiwaangeliyey waqtiga kama dambaysta ah ee 8 -da Ogosto.
Meel kasta oo la heli karo wakhtigaas ka dib waxaa la buuxin doonaa marka ugu horreysa, oo marka hore la adeego ilaa 30ka Ogosto.
Helitaanka barashada internetka ee Semester 2 ayaa la go'aamin doonaa dabayaaqada dayrtaan.